Assistant Manager (Filling Station) | Shwe Byain Phyu Co.,Ltd
Shwe Byain Phyu Co.,Ltd
501-1000 | Yangon 1 Open Jobs
Assistant Manager (Filling Station)
Login to view Salary Recruiter active 1 week ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
၁။ တစ်ကိုယ်ရည်သန် ့ရှင်းမှု နှင့် ဆက်ဆံေရး ‌ေြပ ြပစ်ေကာင်းမွန်မှုရှိရမည်။
၂။ ရုံးချ ုပ်မှ ညွှန်ြကားချက်များအား တိကျမှန်ကန်စွာ လိုက်နာြပီး မိမိဆိုင်မှ ဝန်ထမ်းများအား တိကျစွာ စီမံနိုင်ရမည်။
၃။ မီး‌ေဘးလုံြခံု‌ေရး အြမဲသတိရှိရမည်။
၄။ ေရာင်းချရရှိ‌ေသာ‌ေငွအား တိကျမှန်ကန်စွာ ြပန်လည်အပ်နှံရမည်။
၅။ အကျင့်စာရိတ‌ေကာင်းမွန်ြပီး စိတ်ပါဝင်စားစွာပူး‌ေပါင်း‌ေဆာက်ရွက်ရမည်။
၆။ ဆိုင် နှင့် ဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်သာယာလှပ‌ေစ‌ေအာင် ြကီးြကပ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၇။ ဝန်ထမ်းများ တာဝန်ချိန်တွင် သတ်မှတ်ယူနီ‌ေဖာင်းအား သန် ့ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ဝတ်ဆင်၍ ချိ ုသာရွှင်ြပစွာဆက်ဆံ‌ေရး အတွက် ြကီးြကပ်‌ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၈။ ဝယ်ယူအား‌ေပးသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံသည့် ဝန်ထမ်းများ ဆက်ဆံ‌ေရး‌ေြပြပစ်ေကာင်းမွန်ရန်နှင့် ြပဿနာ တစုံတရာ ြဖစ်ပွားပါက ဝယ်ယူသူစိတ်‌ေကျနပ်‌ေအာင် ‌ေြဖရှင်းနိုင်ရမည်။
၉။ တာဝန်ချိန်အတွင်း ဆိုင်အတွင်း၌ ‌ေဆးလိပ်၊ အရက်‌ေသာက်စားြခင်း၊ ကွမ်းစားြခင်း မြပ ုလုပ်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများအားလည်း စစ်‌ေဆးြကီးြကပ်ရမည်။
၁၀။ စက်သုံးဆီ အ‌ေရာင်းဆိုင် နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများအား စီမံခန် ့ခွဲနိုင်ရမည်။
အသက် ၃၀ နှစ် မှ အထက် ၄၀နှစ် အတွင်း ြဖစ်ရမည်။
ဘွဲ ့တစ်ခုခု ရရြှိပီးသူ ြဖစ်ရမည်။
‌ေနရာ‌ေဒသမ‌ေရွး တာဝန်ထမ်း ‌ေဆာင် နိုင်ရမည်။
သက်ဆိုင်ရာ ဆီဆိုင်တွင် ‌ေနထိုင်နိုင်ရမည်။
စီမံခန် ့ခွဲ‌ေရး၊ အုပ်ချ ုပ်‌ေရး အ‌ေတွ ့အြကုံ အနည်းဆုံး ၃နှစ်ရှိရမည်။
ကွန်ပျ ူတာအသုံးြပ ုနိုင်ရမည်။
Meal and accommodation.
* In Order to fulfill the local demand of steadily going Myanmar Petrol Market, Manaw Thitar Co.,Ltd, our main foundation of SBP Group of companies, commenced operation in 1996 with two others companies to support the operation. We take pride in being the pioneer petroleum trading company, working with suppliers from overseas to provide our customers with high quality petroleum. we distribute various type of gasoil and mogas (Octane). We had imported over 20,000 to 60,000 metric tons petroleum products every month based on demands. With over 20 years of experience, we are one of the leading companies in this industry.
* We distribute throughout Myanmar with our own 65 tank truck and 28 barges. We had depots in Yangon region, Mandalay division, Sagaing Division and Kachin State. Our main focus is wholesales and distribution but we also have retail petrol stations.
PETROL RETAIL STATION
* In 2010, MPPE (Myanmar Petroleum Products Enterprise) started opening the sector to the private sector by privatizing 216 states owned petrol stations across the country. This has paved the way for private companies like us to step into the market, since then the market has been growing upaCAGR (Compounded Annual Group Rate). 18% since 2010. With the government recognition of our experience and success in the petroleum trading sector, they had entrusted us with 16 petrol stations by the ministry of energy. To this day we have expended to 29 petrol stations nationwide buildawide network of retail stations and commercial businesses andaone stop service provider for our customer. Nowadays, Shwe Byain Phyu Group of Companies has been recognized as one of the market leader in Myanmar's petroleum trading sector.
* Shwe Byain Phyu company's retail stations are established under the brand "SBP Oil." For well over decades, Shwe Byain Phyu has been supplying quality products services to customers in Myanmar. Our future plan for retail is to open more than 70 petrol stations throughout Myanmar by 2021.
Assistant New Channel Manager (E-Commerce)
Unilever Myanmar Group
Assistant Manager, ERP Subject Matter Expert
Fine Gems & Jewellery Co.,Ltd
Assistant Manager, Cash Operations (YGN, MDY)
AA Medical Products Ltd. (Pacific-AA Group)
HR Manager Or Assistant Manager (Male)
Assistant Manager(Treasury) -6To12 Months Contract
Apollo Towers Myanmar Limited
Assistant Manager - Regulatory Reporting
HR & Admin Assistant Manager/Excustive
Admin Assistant Manager
GRAND GUARDIAN NIPPON LIFE INSURANCE